कृषि उद्यम केन्द्रबाट ५० करोड असुली गर्न कृषि मन्त्रालयको ताकेता - Nepal Readers
व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तरगतको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी)मा भएको करिब ५० करोड भन्दा बढीको अनियमितताका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी कृषि मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाएको छ । कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको ठाडो आदेशमा मन्त्रालयले केन्द्रमा भएको उपसचिव बद्री दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको छ । समितिले केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर भ्रष्टाचार भएको रकमको असुल उपर गर्न आदेश दिने र नभएमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
निश्चित छ, केन्द्रमा बेरुजु रहेको करिब ५० करोड रकमको पर्छाैट गर्न सक्ने अवस्थामा राणा रहेकी छैनन् । यदि उनीसँग भरपर्दो कुनै आधार भए पहिले नै हिसाब मिलाइसकेकी हुने थिइन । त्यसैले यदि कृषि मन्त्रालय र अख्तियारले साँच्चै नै कारबाही गर्ने हो भने राणा र लुटमा उनको मतियारको रूपमा काम गरिरहेका महर्जन लगायतका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा महर्जन त भूमिगत भएर पलायन हुने तयारीमा लागिसकेका छन्, राणाले के गर्लिन् ? के साँच्चै विगतमा जस्तै यस पटक पनि अख्तियार र कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारेर बच्लिन् ? त्यो भने केही समयमै थाहा हुनेछ । राणाको लागि खुसीको कुरा के छ भने—कृषि मन्त्रालयको सचिवमा डा. योगेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन्, जो विगत देखि नै राणालाई कारबाही गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । तर, के सचिव कार्कीको अडानले यस पटक काम गर्ला ? इ-एग्रो न्यूज